Inona no atao hoe autism - olona malaza amin'ny autisme
Inona no atao hoe autism - famantarana sy fomba fitsaboana
Inona no atao hoe autism, inona ny famantarana ny ankizy sy ny olon-dehibe mijaly amin'ny aretina, dia ny fitsaboana aretina - fanontaniana izay mahakasika olona marobe manerana izao tontolo izao izay niaina ity korontana ity tamin'ny havan-tiany. Ny fahatsapan'ny otisma dia fampiononana kely ihany ho an'ireo izay te hahita ny zanany ho ara-dalàna sy amim-piravoravoana.
Autism - inona ity?
Inona no atao hoe autism ary nahoana no mitombo avo folo heny ny isan'ireo nateraka amin'io aretina io tao anatin'ny taona vitsivitsy - ireo diplaoma ireo dia mifandray amin'ny biôlôjia sy ny génétique. Misy fanontaniana bebe kokoa noho ny valiny. Ny autism dia aretina voajanahary mifandray amin'ny toetra mampiavaka ny atidoha ao anatin'ny vanim-potoanan'ny intrauterine. Eo amin'ny fiainana dia misy fanitsakitsahana maromaro amin'ny fifandraisana ara-tsosialy, ny fampifanarahana ary ny fanolorana ny autist ao aminy.
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny syndrome sy ny otisma?
Autism - inona ity aretina ity ary inona no ifandraisany amin'ny sendran'ny Down? Ny sasany mino fa io ihany no aretina. Ireo ankizy-daunyata dia tena tia mandray vahiny, fa amin'ny 10% amin'ny tranga dia lasa mpikatroka. Ny fahasamihafan'ny otrikaretina Down avy amin'ny autisme:
Ny aretina mitranga dia aretina matematika goavam-be misy tromobôma 21, izay miara-dia tsy roapolo, fa roapolo roapolo. Autism - fanitsakitsahana ny fivoaran'ny atidoha.
Ny marary Down dia manana toetra miavaka eo amin'ny bika aman'endriny, ka noho izany, mitovitovy amin'ny zaza ny aretina (ny orona kely, ny hoditra fahatelo, ny vava misokatra, ny tarehy fisaka). Ny autres dia mety ahiahina ho fandikana ny fitondran-tena.
Ny ankizy amin'ny aretin'i Down dia iharan'ny diky. Ao anatin'izany dia misy olona manana talenta maromaro manana fahaiza-manao manokana, mitranga amin'ny aretina mitaona, ny tsy firaharahiana zaza tsy ampy taona, ny endrika marefo amin'ny autism.
Antony mahatonga ny otisma
Ny otisma na ny aretin-kozatra ara-pahasalamana, ny génétique dia tsy manome famaritana marina ny antony mahatonga ny aretina eo amin'ny mpikaroka mihoatra noho ny fahasamihafana, saingy misy ny antony mahazatra sy ny antontam-bahaolana momba ny fivoaran'ny aretina:
fialana amin'ny fampandrosoana ny atidoha amin'ny vanim-potoanan'ny intrauterine;
fanitsakitsahana ny fizotry ny metabolika;
Ny aretina vokatry ny reny (toxoplasmosis, rubella) mandritra ny fitondrana vohoka;
Vakinankaratra (tsy voamarina).
Famantarana ny Autisme
Inona no atao hoe autisme ary ahoana no maneho azy? Ny atidoha dia manintona avy hatrany ny fiheverana, saingy ny fanadihadiana dia azo atao raha tsy aorian'ny fandinihana sy ny fanaraha-maso tsara. Matetika ny mari-pahaizana momba ny autisme dia famantarana marika momba ny aretina hafa na aretina hafa, toy ny schizophrenia, syndrome Down , ny epilepsy ary ny fikorontanan'ny hafanana.
Autism amin'ny olon-dehibe - famantarana
Ny autist dia olona iray mifantoka amin'ny zavatra tsy dia mahazatra loatra amin'ny olon-tsotra. Ny autism amin'ny olon-dehibe dia miseho amin'ny fikorotanana kely eo amin'ny fizotran'ny fifandraisana, ho an'ny demokrasia. Inona ny otisin'ny olon-dehibe mety ho voampanga amin'ny:
mitombo ny fahatsapana;
fihetsika mifanentana amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana tsy miankina;
Tandremo tsara ny fitsipika sy ny fombafomba noforoniny;
fisintahana, matetika mifandray amin'ny fahaiza-manao fahaiza-manao.
Famantarana marary mafy amin'ny areti-maso:
ny tsy fitoviana ara-tsosialy;
tsy fahafahana mametraka fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fizakan-tena;
Autism amin'ny ankizy - famantarana
Ny zaza autistique dia olona tafatsofoka ao amin'ny tontolony. Ny toetra tsirairay dia manana ny toetrany tsy manam-paharoa sy ny fisehon'ny otrik'aretina otisialy tsirairay, saingy misy marika mampiavaka azy:
Hatramin'ny fahazazany, tsy misy fitiavana ny reny;
ny fifandraisana amin'ny maso dia tsy manohana;
Manomboka miresaka tara sy kely ny ankizy;
Aleo milalao amin'ny zavatra tsy mahazatra na miaraka amin'ny kilalao tokana;
Nandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 taona, dia hita fa misy ireto soritr'aretina manaraka ireto:
Ny teny dia misy fehezanteny misy ren'ny olon-dehibe, avy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy radio;
Ny fiovan'ny akanjo, ny fiovan'ny làlana na ny toe-javatra any an-trano dia miteraka tebiteby mafy;
Ny ankizy dia miavaka amin'ny stereotypes.
Raha zatovo ny zatovo dia mety hijanona ho tovozina ny ankizy:
ny faniriana irery;
mipoitra tampoka ny herisetra.
Azo atao ve ny manasitrana ny autisme?
Na ny fitondrana ny otisma no tena olana lehibe amin'ny ray aman-dreny izay voamarina amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fanadihadiana ny fanadihadiana ny ankizy. Mampalahelo - tsy voatsabo izy, fa tsy tokony ho antony mahatonga ny fahakiviana izany. Ny asa lehibe rehetra hanatsarana ny toe-pahasalamana sy ny fiaraha-mitantana ny zaza dia mianjera amin'ny soratry ny ray aman-dreny. Avy amin'ny hetsika ataon'izy ireo: arakaraka ny toro-marihan'ny dokotera, ny fitiavana, ny faharetana ary ny hatsaram-panahy dia miankina amin'ny fivoaran'ny tena manokana amin'ny zaza autistique.
Fitsaboana ny Autisme
Ny fitsaboana ny autistics dia atao arakaraka ny fahaverezan'ny fizotran'ny korontana. Ny endrika maotin'ny otisma dia voahitsy amin'ny fanampian'ny programa fitsaboana sy fanabeazana. Amin'ny fahombiazana, ny fampiasana ny fitsaboana amin'ny biby (hippotherapy, fitsaboana amin'ny feso) - ny fifandraisana amin'ny autisme amin'ny biby dia mitarika ho amin'ny fihenanan'ny psyche. Ao amin'ny endrika marefo amin'ny otisma, miaraka amin'ny aretina goavana, ampiasaina ny fitsaboana zava-mahadomelina.
Fitsaboana amin'ny autism
Tsy misy ny fitsaboana manokana ho an'ny autisme, misy ny marary fotsiny, izay mikendry ny hanafoana ny soritr'aretina. Ny fanitsiana dia atao amin'ny alikaola:
Haloperidol (neuroleptika). Ny fihanaky ny fitondran-tena, mampihena ny fijerena ny fihetsika dia manala fientanam-po amin'ny môtô, manamora ny fifandraisana ara-tsosan'ity zaza ity.
Ny fanafody lithium dia manamaivana ny fanafihana fahatezerana sy fitondran-tena manimba.
Fluoxamine, fluoxetine (serotonin reuptake inhibitors) - dia ampiasaina amin'ny fanjakana depression sy ny stereotypes.
Ny fitsaboana ny autisme amin'ny homéopathie dia tsy voan'ny aretina, fa toy ny fitaovana fanampiana dia nampiharina tamim-pahombiazana. Fiomanana amin'ny homamiadasy amin'ny fitsaboana ny autisme:
Autism - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Ny fiheverana ny autisme dia andraikitra goavana, miorina eo anelanelan'ny havan-tiana, ary tsy azo ekena eto ny fanafody. Ny fitsaboana nentim-paharazana dia mety ho fanampiny ho an'ny fitsaboana fototra notendren'ny manam-pahaizana iray. Ny fitsaboana amin'ny herisetra dia ny mampiato ny toe-piainana ara-pihetseham-po, noho izany, ampiasaina ny fampidiran-kena amin'ny herisetra:
Sakafo ao amin'ny Autism
Ny aretin'ny autism dia aretina tsy vitan'ny hoe toe-tsaina ara-tsaina, fa koa metabolika. Fantatry ny ray aman-dreny mihetsiketsika fa tsy milefitra amin'ny karazan-tsakafo sasany ny zanany, ary rehefa tsy azo hanina ny ronono toy izany, ny soja, ny ronin-dranomamy dia mihatsara kokoa ary lasa tsara kokoa ny tontolo iainana. Izany dia nahatonga ny hevitra hoe mamorona fikarakarana manokana ho an'ny fitsaboana otrik'aretina, noho izany, ireto singa manaraka ireto dia tokony hesorina amin'ny sakafo:
Casein (hita amin'ny vokatra avy amin'ny biby isan-karazany avy amin'ny biby);
gluten (proteinina aty amin'ny vary, varimbazaha, aviavy ary vary orza);
aspartame (fanasitranana artificiel ampiasaina amin'ny fitotoan-tsakafo, karaoty, mena);
glutamate sodium (fanampiny, mampitombo ny tsiron'ny entana, izay ampiana).
Ireto manaraka ireto dia soso-kevitra:
tsaramaso (tsaramaso, ahitra, kakazo, lentila);
Vidiny tsy misy glutenina (buckwheat, mielafatra, katsaka, amaranth);
karazana legioma, voankazo;
Asehoy ny sarimihetsika mikasika ny autistics
Mpanakanto malaza maro no manandratra ny lohahevitry ny olona manokana amin'ny sary hosodoko. Inona no atao hoe autist ary inona no mampiavaka ny olona tahaka izany, azonao jerena amin'ny fijerena ireto sarimihetsika mahafinaritra manaraka ireto:
"Ny fipoiran'ny Mercury / Mercury Rising . " Mpandresy Amerikana tamin'ny taona 1998 niaraka tamin'ny B. Willis amin'ny anjara asan'ny mpiara-miasa ao amin'ny FBI, izay miaro an'i Simon, zazalahy, izay nanambara ny fehezan-dalàna miafin'ny fandaharan'asam-panjakana "Mercury". Simon dia 9 taona ary fiasa ara-tsaina miaraka amin'ny tarehimarika ary ny sifotra dia tsy manasarotra ny fahasarotana ho azy, izy dia mpanao otri-maso izay nifantoka tamina tolotra manokana.
"Khan ny anarako. " Ny horonantsary dia manondro ny fisehoan-javatra tamin'ny taona 2011, raha ao an-tsain'ny olona ny silamo no loharanon'ny loza sy ny fampihorohoroana. Rizvan Khan dia Miozolomana iray izay mijaly amin'ny endrika miavaka amin'ny otrikaretina otrikaretina otisitera dia nahavita nanaporofo fa eo anivon'ny firenena sy ny fivavahana dia tsara fanahy sy tsara fanahy.
Rain Man . Dustin Hoffman amin'ny maha-lehilahy (mpanome fahafaha-mizaka ny fahaiza-miaina) miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena sy fahaizana amin'ny sehatra vitsivitsy hamokarana matematika matihanina, nefa mitoetra eo amin'ny ambaran'ny fampandrosoana ny zaza madinika mora vidy. Matahotra ny hisidina amin'ny seranam-piaramanidina izy, satria mitazona fahatsiarovana marobe ireo olona maty tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina.
"Temple Grandin . " Ny horonantsary dia mifototra amin'ny tantaram-piainan'ny manam-pahaizana momba ny zavamananaina malaza sady mpanoratra, izay nifanohitra tamin'ilay diabolikan'ny "autism", dia nahomby teo amin'ny fiarahamonina.
Adama / Adama . Sarimihetsika iray mikasika ny fahasarotana amin'ny fiarahamonina olona amin'ny aretim-pirahalahiana ary ny maha-zava-dehibe ny fitadiavana ny fiantsoana azy ireo.
Ny endrika mora amin'ny otrik'aretina otisika dia afaka "manome" olona iray manana ny sehatra amin'ny sehatra rehetra. Ben Affleck, mpanatontosa fanatanjahan-tena iray tao amin'ny sarimihetsika "Payback", dia nitantaran'asa toy izany. Ao amin'ny tena fiainana, tena zava-mitranga tokoa fa ny natiora, izay manana ny tsy manana, dia manome valisoa ny olona manana fahaiza-manao sy talenta hafa. Ho fanohanana an'izany, misy ireo olona izay nanome fambara maro sy zava-baovao maro eran-tany. Olona malaza amin'ny autisme:
Leonardo da Vinci . Ny fanirian'ny mpanakanto sy ny mpamorona ho amin'ny fahalavorariana sy ny fametrahana be loatra amin'ny tsipiriany madinika (ny molotra ao amin'ny Mona Lisa dia nosoratan'ny geniasy nandritra ny 12 taona) dia manolotra olona manandanja ao amin'izany.
Kim Peak . Ny tena prototype an'ny maherifo amin'ilay sarimihetsika "Ilay Lehilahy avy any amin'ny Oseana." I Kim dia teraka niaraka tamin'ny taova maro tao amin'ny atidoha. Taty aoriana dia hita fa ilay zazalahy dia manana fahatsiarovana mahavariana ary mahatsiaro hatramin'ny 98% amin'ny vaovao vakiana na hita.
Temple Grandin . Nandany ny sehatry ny diagnosy, io mpahay siansa mahay io dia nanao tetik'asa sosialy maro ary nitantara ny zavatra niainany manokana momba ny aretim-pon'ny otisista. Namorona ilay lazaina hoe "famihinana" milina izy, mba hampitony ireo autistes miaraka amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
Lionel Messi . Ilay mpikomy fanta-daza "Barcelone" ary araka ny tsikera dia mpilalao baolina kitra mpilalao baolina indrindra eto an-tany i L. Messi, izay tsy manakana azy tsy ho mpandray anjara amin'ny orinasany.
Donna Williams . Inona no atao hoe otisma zaza, mpanakanto mahay sy mpanoratra mpanoratra aostralianina fantatry ny rehetra. Fony mbola zaza i Donna, dia marenina sady nalemy ara-tsaina mandra-pahitany ny otisma.
Ahoana no atao mba hampitony ny hafanana sy hanamaivanana ny adin-tsaina?
Psychology ny torimaso
Tahotra ny toerana mihidy sy ny fomba handresena azy?
Ny ganagan'ny ankizy
Ny Printsesa Madeleine dia hanafaka ny bokiny manokana ho an'ny ankizy
Nilaza i George Clooney fa nankalaza ny tsingerin-taonan'ny fampakaram-bady ny tenany sy ny vadiny
Nahoana no manonofinofy kisoa bevohoka?
Karakarao ny renirano rehefa avy nijinja
Afaka varahina ve ny laminasa?
Ny ravin-kiran'ny ririnina - ny fananana medikaly sy ny fanoherana
Inona no mampiavaka ny olona?
Famaranana ny ravina
Drinking energy - loza